Iifoto ezili-10 zeNdlu kaKaley Cuoco - Ekhaya
Abahlobo Nosapho Imikhwa Uhlobo Lweceleb Kwiindaba Iimveliso Ulusu Uphononongo Lweemovie Kufuneka Ubone Ulwazi Kunye Nemfundo Izilwanyana Zasekhaya
Ukhe uzibuze ukuba injani indlu kaKaley Cuoco? Nalu uluvo ngaphakathi
Ukulandela isiphelo somboniso wakhe wexesha elide, Ingcingane ekulu kakhulu , U-Kaley Cuoco uqala ngokutsha ngokumba okutsha kraca. Ewe, umdlali weqonga oneminyaka engama-34 kunye nomyeni wakhe, umlingani wehashe uKarl Cook , ekugqibeleni bahamba kunye kwaye bakwinkqubo yokwakha ikhaya labo lamaphupha. Ke, uCuoco kutshanje wambeka eTarzana, eCarlifonia, indlu kwintengiso nge-4.895 yezigidi ezipholileyo zeedola. Wathenga indlu emalunga neenyawo ezingama-8,000 ukusuka kuKhloe Kardashian kunye noLamar Odom ngo-2014 kwaye ngoku sele ekulungele ukwahlukana nendawo yemidlalo bhanyabhanya eyandayo kunye nasemva kwendlu eluhlaza. Nazi iifoto ezilishumi zendlu kaKaley Cuoco. (Isilumkiso: Unokufuna igumbi lokuhlamba emva kwale.)
Ukuphefumla kukaCuoco eLos Angeles kuhlala ngasemva komnyango okhuselekileyo kwaye kunwenwe ngaphezulu kweekota ezintathu zehektare. Njengoko ubona, kuninzi ukupaka kweendwendwe kunye negumbi lemisebenzi.
2. Igumbi loSapho
Emva kokungena kwifoyer enemigangatho emibini enesitepisi egosogoso, iindwendwe ziya kuqaphela igumbi losapho elinobungakanani kunye neeseti zokujika ezixhonywe eluphahleni. Ngubani ofuna iisofa xa uneebhentshi ezijingayo zangaphakathi?
3. Igumbi lokuhlala
Kukwakhona, ewe, igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlala yesiqhelo kunye neTV enkulu. Olo luvo nalo alubi kangako.
4. Igumbi lokutyela
Igumbi lokutyela elisemthethweni alikho nto yokubhabha kuyo, kunye nokuhlala kweengcango ezilishumi nezaseFrance ezikhokelela kwiyadi yokutshayela.
Ikhitshi libonakala linendawo ethile eseleyo yesimbo sokutyikitya seKardashians. Qaphela iitayile zejiyometri zasekhitshini ezibekwe ngokuchasene nephepha lodonga elisophahleni. Ngombulelo, isiqithi kunye neCarrara countertops zemarble zikhululekile.
6. Iholo yemiboniso bhanya bhanya
Kwaye, nje ukuba amagumbi okuhlala amaninzi akonelanga, ikhaya likwabonisa indawo yemidlalo bhanyabhanya enkulu nekhabhathi yesiko.
7. Igumbi lokulala lokulala
Ikhaya likaCuoco linamagumbi okulala amathandathu, kunye neendawo zokuhlambela ezintathu. Igumbi lakhe lokulala lokulala lidibanisa indawo yokubasa umlilo kunye neengcango zaseFrance ezikhokelela kumhlaba ongaphandle.
8. I-Master Closet
Ii-closet zokuhamba, kufuneka sivume, zizinto ezimsulwa. Ewe, iikhabhathi . Kukho ezintathu kwigumbi lokulala eliyedwa.
9. Igumbi lokuhlambela iimpahla
Mhlawumbi ngekhe sikoyike ukusonga impahla kakhulu xa igumbi lethu lokuhlambela libonisa iiseti ezimbini zokomisa iimpahla, i-TV kunye nekhandlela.
Kwaye, ekugqibeleni, emva kwendlu. Ayisiyiyo kuphela ipuli enezitulo zokuphumla ezininzi zokubamba imitha ethile, kodwa kukwakho netafile yokutyela ngaphandle yeentsuku zobusuku zasehlotyeni ezifudumeleyo, ibha emanzi, indawo yokutya inyama kunye nengca eyomileyo.
Umbuzo wethu kuphela: Singangena nini?
Ezinxulumene : I-Saoirse Ronan's I-Irish Esaside Escape Eside iyathengiswa kwaye i-Sunroom ilungile
Izigaba Iimveliso Ekhaya Impilo
iinwele ezahlukileyo ezisikiweyo zamanenekazi
indlela yokulwa nokulahleka kweenwele
esona siqhamo sihle seprotein
indlela yendalo yokulawula ukuwa kweenwele
yintoni ishampu epholileyo